बैतडीमा विद्युत सेवा अनियमित हुँदा समस्या !! | सुदुरपश्चिम खबर
बैतडीमा विद्युत सेवा अनियमित हुँदा समस्या !!
बैतडी, ३० चैत
पछिल्लो समयमा बैतडीमा विद्युत सेवा अनियमित हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । विद्युत सेवा अनियमित हुँदा व्यापारीहरुलाई समेत समस्या भएको छ । विद्युत सेवा अनियमित हुँदा आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएको दशरथचन्द नगरपालिका १ का व्यापारी नारायण भट्टले बताउनुभयो । ग्रिलको काम गर्न विद्युत अनिवार्य भएपनि विद्युत सेवा अनियमित हुँदा समयमा काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै मिल सञ्चालक, सञ्चार माध्यम र सरकारी कार्यालयहरुमा पनि विद्युत सेवा अनियमित हुँदा समस्या भएको गुनासो बढेको छ । जिल्लाका सबै जसो क्षेत्रमा विद्युत सेवा अनियमित भईरहेको स्थानीयबासीहरुले बताएका छन् । तर विद्युत प्राधिकरणले भने हावाहुरीका कारण लाइनमा समस्या आउँदा विद्युत प्रशारणमा अवरोध हुने गरेको बताएको छ ।
लामो लाइन भएका कारण हावाहुरीले तार र पोलमा क्षति पुर्याउँदा विद्युत अनियमित हुने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रका सुपरभाइजर माधवप्रसाद लेखकले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाभरीको लाइन एकै ठाउँबाट भएकाले एक ठाउँमा बिग्रिँदा अन्य ठाउँमा पनि समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
हावाहुरीकै कारण विद्युतका संरचना क्षति पुग्ने र त्यसले विद्युत सेवा अनियमित हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैतडीमा १४ हजार बढी घरधुरीमा विद्युत सेवा सञ्चालनमा छ । (ninglashainionline बाट सभार)
बैतडीको सुर्नयामा सुत्केरीलाई उपाध्यक्षको कोसेली !!
यस्तो हुन्छ सोमबार जन्मिएका मानिसको स्वभाव !!